समाचार नुनुता राई
'महानायक' उपाधिबारे चलचित्रकर्मी विभाजित, हमालले भने– उहाँलाई माफ गरिदिनुस्
‘महानायक’ उपाधिको कारण वेलाबखत राजेश हमाल विवादमा तानिंदै आएका छन् । तर, यसपटक उनी नभई कलाकार तथा निर्देशक दीपाश्री निरौला विवादमा परिन् । सामाजिक सञ्जालमा उनको तीव्र विरोध भएपछि राजेश हमालले फेसबूकमा भिडियो सार्वजनिक गर्दै माफ गरिदिन आफ्ना समर्थकसँग आग्रह गरेका छन् ।
वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइलाई निरन्तरता दिन सरकारले निर्देशन दिए पनि प्रविधिमा असमान पहुँचले ठूलो संख्या पढाइबाट वञ्चित छ । काठमाडौं उपत्यकाका विद्यालयहरूमा अध्ययनरत कतिपय विद्यार्थी समेत प्रविधिको पहुँचमा छैनन् ।
कस्तो भाँडामा गर्ने कौसी खेती ? विरुवाका लागि तापक्रम सन्तुलित हुने र राम्ररी सप्रिने भएकाले कौसी खेतीमा स्थानीय उत्पादन माटोको गमलाको प्रयोग बढी उपयुक्त मानिन्छ।
के महामारीकै बीच होला त रातो मत्स्येन्द्रनाथको जात्रा ? काठमाडौं उपत्यकामा भव्य रूपमा मनाइने अधिकांश जात्रा यो वर्ष सामान्य पूजामा सीमित हुँदा ललितपुरको रातो मत्स्येन्द्रनाथ र मीननाथ रथ जात्राका लागि रथ निर्माण थालिएको छ । दुवै जात्राको तयारी ढिलो गरी शुरू गरिएको हो ।
अनलाइनबाटै योग कक्षा, हानिकारक पनि हुनसक्छ बन्दाबन्दीले धेरै मानिसमा मानसिक तथा शारीरिक समस्या हुनसक्ने सम्भावनालाई कम गर्न निःशुल्क अनलाइन कक्षा भइरहेका छन् । तर उमेर र वजन अनुसार योगासन तथा श्वासप्रश्वास प्रक्रिया नमिल्दा उल्टै समस्या हुनसक्ने प्रशिक्षकहरू बताउँछन् ।
छायांकन ठप्प हुँदा संकटमा चलचित्र प्राविधिक चलचित्र निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने ड्रेस म्यान, हेयर डिजाइनर, स्पट ब्वाई, भान्सा तयार गर्ने समूहको पनि योगदान महत्वपूर्ण हुन्छ । तर तुलनात्मक रूपमा उनीहरूले कम पारिश्रामिक पाउँछन्। काम पनि अनियमित हुन्छ ।
'बाँच्नै कठिन भए पनि कलाकारिता छाडिन्न' रंगमञ्चमा भविष्य खोजिरहेका युवा रंगकर्मीहरू कोरोना महामारी र बन्दाबन्दीले कला गतिविधि ठप्प बनाएपछि जीविका र करिअरको चिन्तामा छन्।
संकटमा रंगमञ्च : टिकाउने कसरी ? कोरोनाभाइरसको महामारीले कला गतिविधि ठप्प भएका नाटकघरहरू तत्काल कसरी टिकेर अघि बढ्ने भन्ने चिन्तामा छन्।
बन्दाबन्दीकै कारण खान समस्या भएकालाई खाद्यान्न वितरण गरेका स्थानीय तहहरू अब राहतको स्वरुप फेरिरहेका छन् । धेरैजसोले अशक्त बाहेकलाई रोजगारी दिन थालेका छन्।
स्थानीय तहको गुनासोः सरकारको मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टिन बनाउन असम्भव
विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेबमोजिम क्वारेन्टिन बनाउन संघीय सरकारले मापदण्ड तोकेको छ । तर स्थानीय तहहरूले मापदण्ड बमोजिम क्वारेन्टिन बनाउन नसक्ने जनाएका छन् ।
वैकल्पिक प्रणालीबाट पठनपाठन गर्न शिक्षा मन्त्रालयद्वारा निर्देशिका जारी
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कोभिड १९ को संक्रमणका कारण अवरुद्ध रहेको सिकाइ प्रणालीलाई सुचारु गर्न वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ जारी गरेको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अनलाइनबाटै भाइभा लिने त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राज्ञिक परिषदले स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल र विद्यावारिधि शोधपत्रको मौखिक परीक्षा (भाइभा) अनलाइनबाटै लिने निर्णय गरेको छ ।
हिम्मतले जितिन्छ कोरोना संक्रमण, तर प्राथमिकतामै छैन मानसिक स्वास्थ्य परामर्श कोरोनाभाइरसको संक्रमणपछि मृत्यु हुनेभन्दा स्वास्थ्य लाभ गर्नेको संख्या धेरै छ । विभिन्न मुलुकमा तीन महीनाको बच्चादेखि ११३ वर्षकी वृद्धा समेत स्वास्थ्य लाभ गरेका छन्। अधिकांशले बलियो मनोबलका कारण कोरोनाभाइरसलाई जितेको अनुभव साटिरहेका छन् ।
सुनसान छन् नदी, १० हजार बेरोजगार नेपालमा लोकप्रिय भइरहेको ‘वाटर स्पोर्टस’ अन्तर्गत राफ्टिङ, क्यानोइङ र कायाकिङ खेलाउन १० हजार जनशक्ति संलग्न छन् । पिक सिजनमा कोरोनाभाइरसको कारण बन्दाबन्दी हुँदा उनीहरु बेराेजगार भएका छन् ।
'शुल्क लिन अनलाइन कक्षा चलाइएको होइन' कुनै पनि विद्यालयले जबरजस्ती शुल्क उठाउँदैनन् । यो वेला विद्यार्थीको सिकाइलाई महत्व दिएर कार्यक्रमहरू ल्याइएको हो । सिकाइ मूर्त चीज होइन । यदि कुनै स्कूलले सिकाइको मूल्य सिर्जना गरेको छ भने त्यसको पनि मूल्यांकन हुनुपर्छ ।
गर्भवतीले नियमित जाँच र खाेप समेत पाएनन् कोरोनाभाइरसको जोखिम र बन्दाबन्दीको यो वेला संक्रमणको डर र अस्पताल जान सवारी साधन नहुँदा गर्भवतीहरूले नियमित जाँच गर्न सकिरहेका छैनन्।
बेरोजगार भए घरेलु कामदार बन्दाबन्दी पछि धेरै घरेलु कामदार बेरोजगार भएका छन् । कतिपयलाई भने कामको बोझ थपिएको छ । तर, कति घरेलु श्रमिक समस्यामा छन् भन्ने तथ्याङ्क कुनै निकायसँग पनि छैन ।
चित्रमा ‘लकडाउन डायरी’ कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणले त्रसित बनाएको विश्वलाई कलाकार रवीन्द्र श्रेष्ठ आफ्ना चित्रमार्फत ढाडस दिइरहेका छन् । उनले चित्रबाटै यो संकट क्षणिक भएको र छिट्टै टरेर जाने संकेत दिएका छन् ।
बन्दाबन्दीमा घरभाडा छुटः भयो त कार्यान्वयन ? आर्थिक अवस्था कमजोर भएका घरबेटीलाई सरकारले आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने, तीन महीनाको ब्यांकको ऋणको ब्याज मिनाहा हुनुपर्ने र घरबेटीले तीन महीनाको भाडा छुट दिनुपर्ने भाडावाल सरोकार समाजको माग छ ।
शिक्षक, विद्यार्थी र कर्मचारीका लागि 'नेट आईडी' को व्यवस्था गर्दै त्रिवि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले शिक्षक, विद्यार्थी र कर्मचारीहरूलाई नेट आईडी दिन थालेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत नेपालभर ६२ वटा क्याम्पस छन् । केन्द्रिय विभाग किर्तिपुर र नेपालभर रहेका क्याम्पसका शिक्षक, विद्यार्थी र कर्मचारीलाई टियु इडियु एन पि (तग।भमग।लउ)जोडिएको इमेल आईडी दिन शुरु गरिएको हो ।
किरात समुदायको उँभौली पर्व शुरू, बन्दाबन्दीका कारण सामूहिक कार्यक्रम नहुने प्रकृति पूजक किरात जातिको विशेष पर्व उँभौली बिहीबारदेखि शुरू भएको छ। यो पर्व हरेक वर्ष वैशाख पूर्णिमाको दिनदेखि १५ दिनसम्म मनाइन्छ।
गाउँ फर्कनेहरुबाट स्थानीय सशंकित, गाउँमा क्वारेन्टिनकाे अभाव बन्दाबन्दीपछि काठमाडौं र अन्य ठाउँबाट धेरै मान्छे मुश्किलले आफ्नै गाउँ पुगे पनि क्वारेन्टिन अभाव र स्थानीयले गरेको संक्रमणको आशंकाका कारण तनावमा परेका छन् ।